महिलालाई जि, उँदै पु,रेर फरार अभियुक्त समातिए, को हुन् उनी ? – Gorkhali Dainik
March 19, 2021 93
काठमाडौं । धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१, सल्यान्टारमा एक महिलालाई जिउँदै पुरेर फरार भएका स्काभेटर अपरेटर समातिएका छन् । पक्राउ पर्नेमा भीमबहादुर बुढाथोकी हुन् । उनलाई कञ्चनपुरस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको गड्डाचौकीबाट पक्राउ गरिएको जनाइएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको छ ।
उनी घटनापछि भारतको हरिद्वार क्षेत्रमा लुकेर बसेको खुलेको सीआईबीका प्रमुख डीआईजी सहकुल थापाले बताए । गएको फागुन तेस्रो साता सल्यानटारको खोल्सी जिपजिपेमा सडक निर्माणका क्रममा एक्स्काभेटरले घाँस बोकेर घर तर्फ फर्कँदै गरेकी स्थानीय ४५ वर्षीया सरस्वती कुमाललाई ठक्कर दिएको थियो । घाइते अवस्थामा उनी खाल्टोमा खसेकी थिइन् । त्यति बेला सडक मजदुर भने खाना खान गएका थिए ।
बुढाथोकीले खाल्टोमा खसेपछि उद्धार गर्नुको साटो माटोले पुरेका थिए । एक बसका यात्रीले स्काभेटरले महिलालाई पुरेको हल्ला गरेपछि मजदुरले खनेर उनको शव निकालेका थिए । चालक भने हल्ला भएपछि फरार भएका थिए । घटनापछि उत्तेजित भिडले एस्काभेटरमा ढुंगामुढा र आगजनी गरेको थियो । उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
Prevआफ्नै भाईद्वारा पत्रकार माथी ह’म्मर आ.क्रमण,
Nextकठै बिचरि ६ बर्षमै ब्लड क्यान्सर,मुटु खराब,किड्नि खराब : छोरी बचाइदिनु भन्दै रुदै बुवा-आमा
आइसियुमा उपचार गराइरहेका बिरामी अस्पतालको तलावाट हामफाल्दा निधन….!